जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले आइपिओ निष्काशन गर्ने, कति पायो रेटिङ ? – Insurance Khabar
जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले आइपिओ निष्काशन गर्ने, कति पायो रेटिङ ?
प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०७८, आईतवार २०:२७
काठमाडौं । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन गर्नका लागि इक्रा नेपालमा रेटिङ गराएको छ । कम्पनीले निष्काशन गर्न लागेको आइपीओलाई इक्रा नेपालले इक्रा आइआर बिबि रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
यस्तो रेटिङले जोखिम मध्यम रहेको देखाउँछ । कम्पनीले ५ लाख २२ हजार कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्काशन गर्नका लागि कम्पनीले विक्री प्रबन्धक नियुक्त गरिसकेको छ । विक्री प्रबन्धकमा कम्पनीले प्रभु क्यापिटललाई नियुक्त गरेको हो ।
जाल्पा सामुदायिकले कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिकाको सिमलाचौरमा प्रधान कार्यालय भई हाल २० जिल्लामा लघुवित्त व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ । संस्थाको हाल १० करोड ७८ लाख चुक्ता पूँजी रहेकोमा थप ५ लाख २२ हजार कित्ता सर्वसाधारणलाई साधारण शेयर निश्कासन गरेपश्चात चुक्ता पूँजी १६ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।